‘လငျဆိုးမယား တဖားဖား’ဘဝနဲ့ရငျဆိုငျနရေပမေယျ့ ကိုယျတညျဆောကျခဲ့တဲ့ အိမျထောငျကို မပွိုပကျြအောငျထိနျးသိမျးနတေဲ့ ကောလငျး – MAN U FAN CLUB
‘လငျဆိုးမယား တဖားဖား’ဘဝနဲ့ရငျဆိုငျနရေပမေယျ့ ကိုယျတညျဆောကျခဲ့တဲ့ အိမျထောငျကို မပွိုပကျြအောငျထိနျးသိမျးနတေဲ့ ကောလငျး
October 14, 2021 Kaung Thant Articles 0
အိမျထောငျတဈခု တညျမွဲဖို့ဆိုတာက အခဈြ၊ သံယောဇဉျတှသောမကဘဲ ခငျပှနျးနဲ့ဇနီးသညျနှဈယောကျကွားမှာ အပွနျအလှနျနားလညျမှုတှရှေိဖို့ကလညျး အရေးပါတဲ့အခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ နားလညျမှုဆိုတဲ့အပိုငျးမှာလညျး အတိုငျးအတာတဈခုအထိသာရှိကွပမေယျ့ တခြို့သောခငျပှနျး၊ အမြားအားဖွငျ့တော့ ဇနီးသညျတှဟော ကိုယျစိတျတိုငျးကတြညျဆောကျခဲ့တဲ့ အိမျထောငျတဈခုကို လှယျလှယျကူကူနဲ့မပွိုကှဲခငျြတဲ့စိတျနဲ့ အဆုံးစှနျအထိနားလညျခှငျ့လှတျပေးတာမြိုးလညျး ရှိတတျကွပါတယျ။ နာမညျကြျောဘောလုံးသမားဟောငျးကွီး ၀ိနျးရှနျနီရဲ့ဇနီးဖွဈတဲ့ ကောလငျးရှနျနီလိုပေ့ါ။ ရှနျနီနဲ့ကောလငျးတို့ရဲ့ အိမျထောငျသကျက (၁၃)နှဈတာခရီးကိုရောကျရှိနပွေီဖွဈပွီး သူတို့မှာ ခဈြစရာကောငျးတဲ့သားရတနာ(၄)ဦးပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျသကျတမျး (၁၃)နှဈအထိကွာမွငျ့နပွေီဖွဈပမေယျ့ ရှနျနီနဲ့ကောလငျးတို့ရဲ့ အိမျထောငျရေးခရီးလမျးက သာယာတဲ့ခရီးတဈခုမဟုတျခဲ့ဘဲ အိမျထောငျပွိုကှဲသှားနိုငျတဲ့ အကျကှဲကွောငျးတှကေ မကွာခဏဆိုသလိုဖွဈနတောပါ။ ဒါကလညျး ရှနျနီလုပျခဲ့တဲ့ အမှားတှကွေောငျ့ပါပဲ။ ခငျပှနျးသညျတဈယောကျမှာ ရှိသငျ့တဲ့စညျးမဉျြးတှေ၊ ထိနျးသိမျးသငျ့တဲ့ကိုယျကငျြ့တရားတှကေို ရှနျနီဟာ မကွာခဏဆိုသလို ခြိုးဖောကျလရှေိ့ပွီး ကောလငျးတဈယောကျ တျောတျောလေးသညျးခံနိုငျခဲ့လို့သာ သူတို့အိမျထောငျရေးက သကျဆိုးရှညျနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါတောငျ ကောလငျးနဲ့ရှနျနီတို့က ဟိုးငယျငယျလေးကတညျးက သူငယျခငျြးသံယောဇဉျ၊ သမီးရညျးစားသံယောဇဉျတှပေေါငျးစပျပွီးတော့ အိမျထောငျတဈခုတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ကောလငျး အသကျ(၁၂)နှဈအရှယျမှာ ရှနျနီနဲ့ စတငျရငျးနှီးခဲ့ပွီး သူတို့နှဈယောကျ အသကျ(၁၆)နှဈပွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ အဖွူရောငျသူငယျခငျြးဇာတျလမျးကို တဈခနျးရပျပွီးတော့ ရငျခုနျသံခငျြးရငျးရငျးနှီးနှီးဖလှယျလို့ရတဲ့ သမီးရညျးစားဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျကို ခိုလှုံခဲ့ကွတယျ။
ရှနျနီဟာ ကောလငျးနဲ့တှဲနတေဲ့အခြိနျမှာကတညျးက သှေးသားသောငျးကနျြးမှုတှကြေူးလှနျခဲ့တာဖွဈပွီး ၂၀၀၄ ခုနှဈတုနျးက ရှာလော့တျဂလိုဗာဆိုတဲ့ ပွညျ့တနျဆာတဈဦးကို ပေါငျ(၁၄၀)ပေးပွီးတော့ ပြျောပါးခဲ့တဲ့အပွငျ အမှတျတရလကျဆောငျအဖွဈတောငျ သူ့လကျမှတျရေးထိုးပေးခဲ့တယျလို့ သတငျးထှကျခဲ့ပါသေးတယျ။ ရှာလော့တျဂလိုဗာနဲ့သတငျးထှကျပွီး (၁)လလောကျအကွာမှာပဲ ဂြီနာမကျကာရဈဆိုတဲ့အသကျ(၃၇)နှဈအရှယျအမြိုးသမီးကွီးတဈဦးနဲ့ လီဗာပူးလျမွို့က ‘ပိုကျဆံပေးရငျ အခြိနျပိုငျးအခဈြအတု’တှကေို ဝယျယူလို့ရတဲ့နရောတဈခုမှာ (၄၅)ပေါငျပေးပွီးတော့ သှေးသားခငျြးဖလှယျခဲ့ကွပွနျတယျ။ ဒါ့အပွငျ ရှနျနီရဲ့တဏှာရာဂမီးက ဘယျလောကျတောငျကွီးမားလဲဆိုရငျ သူ့အဖှားအရှယျလောကျရှိတဲ့ အသကျ(၄၈)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈသူ အနှိပျခနျးနဲ့အလှပွုပွငျရေးဆိုငျကဧညျ့ကွို ပကျထရဈရှာတီယာနေးလို့နာမညျရတဲ့အမြိုးသမီးကွီးတဈဦးကို ခြိတျခဲ့ပမေယျ့ ပကျထရဈရှာတီယာနေးကတော့ ရှနျနီရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝထိခိုကျမှာစိုးလို့ လကျမခံခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီကိစ်စတှနေဲ့ပတျသကျလို့ ရှနျနီက သူတျောတျောလေးနောငျတရမိတယျဆိုပွီးတော့ ‘မိကြောငျးမကျြရညျခငျး’ပွခဲ့ခြိနျမှာ အယုံလှယျမိတဲ့ကောလငျးတဈယောကျ ရှနျနီနဲ့အတူ ဘဝလမျးခရီးကိုလြှောကျလှမျးဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာက သူမအတှကျ အကွီးကယျြဆုံးအမှားဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ ၂၀၀၈ခုနှဈမှာ ကောလငျးနဲ့လကျထပျခဲ့ပွီးလို့ (၁)နှဈလောကျအကွာမှာပဲ ခွစှေမျးခွစေရှိတဲ့ ရှနျနီက သူ့ရဲ့တဈကြော့ပွနျ’ဇ’တှပွေသခဲ့ပွီး ကောလငျး ပထမဆုံးရငျသှေးလှယျထားရခြိနျမှာတောငျ မအောငျ့အညျးနိုငျဘဲ ဂနျြနီသောမဆငျဆိုတဲ့ပွညျ့တနျဆာတဈဦးကို ပေါငျ(၁၀၀၀)ပေးပွီးတော့ ညလုံးပေါကျ ခဈြစခနျးဖှငျ့ခဲ့တဲ့အပွငျ ဘား၊ ကလပျတှနေဲ့ ကာစီနိုဝိုငျးတှကေိုတောငျ အတူသှားတဲ့အထိ အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခါတော့ ကောလငျးလညျး သညျးမခံနိုငျတော့ဘဲ သားဦးလေးဖွဈတဲ့ ခိုငျရှနျနီနဲ့အတူ အိမျပျေါကဆငျးခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ ရှနျနီက လပွေညျထိုးပွီးတော့ ခြော့မော့ခဲ့တာကွောငျ့ ရှနျနီကို ကောလငျး ခှငျ့လှတျလိုကျရပွနျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ‘ခှေးမွှီးကောကျ ကညျြတောကျစှပျ’ဆိုတဲ့စကားအတိုငျးပဲ သိပျမကွာခငျမှာပဲ ရှနျနီဟာ သှေးသားသောငျးကနျြးမှုတှေ ပွနျလုပျခဲ့ပွီး ဒီတဈကွိမျကတော့ အရငျလို အမြိုးသမီးတဈယောကျတညျးနဲ့တောငျ မဟုတျတော့ပါဘူး။ ဟယျလနျဝုဒျ၊ ဂနျြနီလို့အမညျရတဲ့ အမြိုးသမီးနှဈဦးနဲ့အတူ ရှနျနီက Threesome အကှကျခငျးခဲ့ပွီး ဒီသတငျးကို ကောလငျးသိသှားခြိနျမှာ သားလေးရဲ့မကျြနှာကွောငျ့ ခငျပှနျးသညျကို ခှငျ့လှတျပေးခဲ့ရပွနျပါတယျ။
အဲဒီနောကျပိုငျးမှာတော့ ရှနျနီရဲ့ ‘ကုတငျပျေါက ဇာတျလမျး’တှအေကွောငျး သိပျမကွားရတော့ပမေယျ့ ရှနျနီဟာ အရကျလိုငျးကိုရောကျသှားပွီး တဈခါတုနျးက အရကျနဲ့အိပျဆေးတှဲသောကျပွီးတော့ ‘လှတျ’သလိုဖွဈသှားတဲ့အတှကျ အမရေိကနျလဆေိပျက လုံခွုံရေးတံခါးအခကျြပွခလုတျကို သှားနှိပျမိခဲ့လို့ အဖမျးခံခဲ့ရပါသေးတယျ။ ကောလငျးကတော့ အကွိမျတိုငျးမှာ သူမရဲ့လငျသားဘကျကနေ အမွဲရပျတညျပေးခဲ့တာကွောငျ့ ကောလငျးကို ခြီးကြူးရမလား၊ အပွဈတငျရမလားလို့တောငျ မဝခှေဲတတျတော့ပါဘူး။ ခိုငျရှနျနီအပွငျ ကလေး၊ ကဈနဲ့ ကတျဈဆိုတဲ့ သား(၄)ဦးမှေးဖှားခဲ့ပွီးနောကျပိုငျးမှာ ရှနျနီဟာ ခွပွေနျငွိမျသှားပွီး သူကလညျး ဘောလုံးသမားဘဝကအနားယူပွီးတော့ ဒါဘီအသငျးနညျးပွအဖွဈဆောငျရှကျနခြေိနျဖွဈလို့ အသကျအရှယျအရ ရငျ့ကကျြလာပွီလို့ထငျရတုနျးမှာပဲ ‘ဗှေ’ဖောကျလာပါတော့တယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ဇူလိုငျလတုနျးက Snapchat မျောဒယျလျတှနေဲ့အတူ ဟိုတယျတဈခုမှာ ရှနျနီအတူရှိခဲ့တယျဆိုတဲ့ သတငျးက မီဒီယာစာမကျြနှာတှပေျေါမှာ ပြံ့နှံ့ခဲ့ပွနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခငျပှနျးသညျရဲ့အကွိမျကွိမျသစ်စဖောကျမှုခံခဲ့ရတဲ့ ကောလငျးအတှကျ ဒီသတငျးက ရငျခုနျစရာမရှိတော့ပါဘူး။ အိမျထောငျသညျဘဝတဈလြှောကျမှာ ရှနျနီကြူးလှနျခဲ့တဲ့လုပျရပျတှနေဲ့ပတျသကျလို့ ကောလငျးက အခုလိုပဲရငျဖှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ “ကြှနျမ ရှနျနီကို ခှငျ့လှတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့လုပျရပျတှကေ လကျခံနိုငျစရာတော့မရှိပါဘူး။ ရှနျနီကို ခဈြသေးလားလို့မေးရငျ ခဈြနတေုနျးပဲလို့ဖွရေမှာပါ။ ရှနျနီဟာ ခငျပှနျးကောငျးတဈယောကျမဟုတျခဲ့ပမေယျ့ အဖကေောငျးတဈယောကျတော့ဖွဈနဆေဲပါပဲ။ တခြို့တှကေတော့ ဒီလိုစိတျပကျြစရာကောငျးတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ဆကျလြှောကျလှမျးနတေဲ့အတှကျ ကြှနျမကို ရူးမိုကျတယျလို့ ထငျကောငျးထငျနကွေမှာပါ။ ကြှနျမအတှကျ ကလေးတှနေဲ့ကိုယျ့ဘဝကိုယျလြှောကျလှမျးဖို့က ဘာအခကျအခဲမှမရှိပမေယျ့ အဲဒီလိုဘဝမြိုးကွီး မရောကျခငျြပါဘူး။ ကိုယျတညျဆောကျထားတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ခိုငျမွဲအောငျ အကောငျးဆုံးကွိုးစားတညျဆောကျသှားမှာဖွဈပွီး မိသားစုဘဝလေးနဲ့ သိုကျသိုကျဝနျးဝနျးနသှေားဖို့က ကြှနျမဖွဈခငျြတဲ့ ဆန်ဒပါပဲ”။ ကောလငျးလို နားလညျမှုရှိတဲ့ ဇနီးကောငျးတဈယောကျရထားတာတောငျ အကငျြ့ဆိုးတှမေပွငျနိုငျသေးတဲ့ ရှနျနီ အနာဂတျမှာတော့ ခငျပှနျးကောငျးတဈယောကျဖွဈအောငျကွိုးစားနထေိုငျသှားမယျလို့တော့ မြှျောလငျ့ရတာပါပဲ။ ဒီလိုမှမဟုတျဘဲ လိုကျနာရမယျ့အိမျထောငျရေးစညျးကမျးတှကေို ဆကျပွီးခြိုးဖောကျနမေယျဆိုရငျ ‘လူတဈယောကျကို ဆုံးရှုံးလိုကျရပွီးမှ သူ့တနျဖိုးကို နားလညျပွီး နောငျတတဈပှတေ့ဈပိုကျနဲ့ကနျြနရေတဲ့ဘဝမြိုး’မရောကျပါစနေဲ့ ရှနျနီရလေို့ ဆုတောငျးရမှာပဲဖွဈပါတော့တယျ . . .
‘လင်ဆိုးမယား တဖားဖား’ဘဝနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမယ့် ကိုယ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ကို မပြိုပျက်အောင်ထိန်းသိမ်းနေတဲ့ ကောလင်း
အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်မြဲဖို့ဆိုတာက အချစ်၊ သံယောဇဉ်တွေသာမကဘဲ ခင်ပွန်းနဲ့ဇနီးသည်နှစ်ယောက်ကြားမှာ အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေရှိဖို့ကလည်း အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာရှိကြပေမယ့် တချို့သောခင်ပွန်း၊ အများအားဖြင့်တော့ ဇနီးသည်တွေဟာ ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပြိုကွဲချင်တဲ့စိတ်နဲ့ အဆုံးစွန်အထိနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားဟောင်းကြီး ၀ိန်းရွန်နီရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ ကောလင်းရွန်နီလိုပေ့ါ။ ရွန်နီနဲ့ကောလင်းတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက်က (၁၃)နှစ်တာခရီးကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားရတနာ(၄)ဦးပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း (၁၃)နှစ်အထိကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် ရွန်နီနဲ့ကောလင်းတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးခရီးလမ်းက သာယာတဲ့ခရီးတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘဲ အိမ်ထောင်ပြိုကွဲသွားနိုင်တဲ့ အက်ကွဲကြောင်းတွေက မကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကလည်း ရွန်နီလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေကြောင့်ပါပဲ။ ခင်ပွန်းသည်တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေ၊ ထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို ရွန်နီဟာ မကြာခဏဆိုသလို ချိုးဖောက်လေ့ရှိပြီး ကောလင်းတစ်ယောက် တော်တော်လေးသည်းခံနိုင်ခဲ့လို့သာ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးက သက်ဆိုးရှည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် ကောလင်းနဲ့ရွန်နီတို့က ဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းက သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်၊ သမီးရည်းစားသံယောဇဉ်တွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကောလင်း အသက်(၁၂)နှစ်အရွယ်မှာ ရွန်နီနဲ့ စတင်ရင်းနှီးခဲ့ပြီး သူတို့နှစ်ယောက် အသက်(၁၆)နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ အဖြူရောင်သူငယ်ချင်းဇာတ်လမ်းကို တစ်ခန်းရပ်ပြီးတော့ ရင်ခုန်သံချင်းရင်းရင်းနှီးနှီးဖလှယ်လို့ရတဲ့ သမီးရည်းစားဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ခိုလှုံခဲ့ကြတယ်။
ရွန်နီဟာ ကောလင်းနဲ့တွဲနေတဲ့အချိန်မှာကတည်းက သွေးသားသောင်းကျန်းမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းက ရှာလော့တ်ဂလိုဗာဆိုတဲ့ ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးကို ပေါင်(၁၄၀)ပေးပြီးတော့ ပျော်ပါးခဲ့တဲ့အပြင် အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်တောင် သူ့လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ရှာလော့တ်ဂလိုဗာနဲ့သတင်းထွက်ပြီး (၁)လလောက်အကြာမှာပဲ ဂျီနာမက်ကာရစ်ဆိုတဲ့အသက်(၃၇)နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးနဲ့ လီဗာပူးလ်မြို့က ‘ပိုက်ဆံပေးရင် အချိန်ပိုင်းအချစ်အတု’တွေကို ဝယ်ယူလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ (၄၅)ပေါင်ပေးပြီးတော့ သွေးသားချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ ဒါ့အပြင် ရွန်နီရဲ့တဏှာရာဂမီးက ဘယ်လောက်တောင်ကြီးမားလဲဆိုရင် သူ့အဖွားအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ အသက်(၄၈)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ အနှိပ်ခန်းနဲ့အလှပြုပြင်ရေးဆိုင်ကဧည့်ကြို ပက်ထရစ်ရှာတီယာနေးလို့နာမည်ရတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးကို ချိတ်ခဲ့ပေမယ့် ပက်ထရစ်ရှာတီယာနေးကတော့ ရွန်နီရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝထိခိုက်မှာစိုးလို့ လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ရွန်နီက သူတော်တော်လေးနောင်တရမိတယ်ဆိုပြီးတော့ ‘မိကျောင်းမျက်ရည်ခင်း’ပြခဲ့ချိန်မှာ အယုံလွယ်မိတဲ့ကောလင်းတစ်ယောက် ရွန်နီနဲ့အတူ ဘဝလမ်းခရီးကိုလျှောက်လှမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာက သူမအတွက် အကြီးကျယ်ဆုံးအမှားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ ကောလင်းနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးလို့ (၁)နှစ်လောက်အကြာမှာပဲ ခြေစွမ်းခြေစရှိတဲ့ ရွန်နီက သူ့ရဲ့တစ်ကျော့ပြန်’ဇ’တွေပြသခဲ့ပြီး ကောလင်း ပထမဆုံးရင်သွေးလွယ်ထားရချိန်မှာတောင် မအောင့်အည်းနိုင်ဘဲ ဂျန်နီသောမဆင်ဆိုတဲ့ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးကို ပေါင်(၁၀၀၀)ပေးပြီးတော့ ညလုံးပေါက် ချစ်စခန်းဖွင့်ခဲ့တဲ့အပြင် ဘား၊ ကလပ်တွေနဲ့ ကာစီနိုဝိုင်းတွေကိုတောင် အတူသွားတဲ့အထိ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကောလင်းလည်း သည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ သားဦးလေးဖြစ်တဲ့ ခိုင်ရွန်နီနဲ့အတူ အိမ်ပေါ်ကဆင်းခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ရွန်နီက လေပြည်ထိုးပြီးတော့ ချော့မော့ခဲ့တာကြောင့် ရွန်နီကို ကောလင်း ခွင့်လွှတ်လိုက်ရပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ‘ခွေးမြှီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်’ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ရွန်နီဟာ သွေးသားသောင်းကျန်းမှုတွေ ပြန်လုပ်ခဲ့ပြီး ဒီတစ်ကြိမ်ကတော့ အရင်လို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တည်းနဲ့တောင် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဟယ်လန်ဝုဒ်၊ ဂျန်နီလို့အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနဲ့အတူ ရွန်နီက Threesome အကွက်ခင်းခဲ့ပြီး ဒီသတင်းကို ကောလင်းသိသွားချိန်မှာ သားလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့် ခင်ပွန်းသည်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ရွန်နီရဲ့ ‘ကုတင်ပေါ်က ဇာတ်လမ်း’တွေအကြောင်း သိပ်မကြားရတော့ပေမယ့် ရွန်နီဟာ အရက်လိုင်းကိုရောက်သွားပြီး တစ်ခါတုန်းက အရက်နဲ့အိပ်ဆေးတွဲသောက်ပြီးတော့ ‘လွတ်’သလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အမေရိကန်လေဆိပ်က လုံခြုံရေးတံခါးအချက်ပြခလုတ်ကို သွားနှိပ်မိခဲ့လို့ အဖမ်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ ကောလင်းကတော့ အကြိမ်တိုင်းမှာ သူမရဲ့လင်သားဘက်ကနေ အမြဲရပ်တည်ပေးခဲ့တာကြောင့် ကောလင်းကို ချီးကျူးရမလား၊ အပြစ်တင်ရမလားလို့တောင် မဝေခွဲတတ်တော့ပါဘူး။ ခိုင်ရွန်နီအပြင် ကလေး၊ ကစ်နဲ့ ကတ်စ်ဆိုတဲ့ သား(၄)ဦးမွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ရွန်နီဟာ ခြေပြန်ငြိမ်သွားပြီး သူကလည်း ဘောလုံးသမားဘဝကအနားယူပြီးတော့ ဒါဘီအသင်းနည်းပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေချိန်ဖြစ်လို့ အသက်အရွယ်အရ ရင့်ကျက်လာပြီလို့ထင်ရတုန်းမှာပဲ ‘ဗွေ’ဖောက်လာပါတော့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းက Snapchat မော်ဒယ်လ်တွေနဲ့အတူ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ရွန်နီအတူရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက မီဒီယာစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့အကြိမ်ကြိမ်သစ္စဖောက်မှုခံခဲ့ရတဲ့ ကောလင်းအတွက် ဒီသတင်းက ရင်ခုန်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ အိမ်ထောင်သည်ဘဝတစ်လျှောက်မှာ ရွန်နီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကောလင်းက အခုလိုပဲရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်မ ရွန်နီကို ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့လုပ်ရပ်တွေက လက်ခံနိုင်စရာတော့မရှိပါဘူး။ ရွန်နီကို ချစ်သေးလားလို့မေးရင် ချစ်နေတုန်းပဲလို့ဖြေရမှာပါ။ ရွန်နီဟာ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် အဖေကောင်းတစ်ယောက်တော့ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ တချို့တွေကတော့ ဒီလိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ဆက်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့အတွက် ကျွန်မကို ရူးမိုက်တယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်နေကြမှာပါ။ ကျွန်မအတွက် ကလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုယ်လျှောက်လှမ်းဖို့က ဘာအခက်အခဲမှမရှိပေမယ့် အဲဒီလိုဘဝမျိုးကြီး မရောက်ချင်ပါဘူး။ ကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ခိုင်မြဲအောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး မိသားစုဘဝလေးနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနေသွားဖို့က ကျွန်မဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒပါပဲ”။ ကောလင်းလို နားလည်မှုရှိတဲ့ ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ရထားတာတောင် အကျင့်ဆိုးတွေမပြင်နိုင်သေးတဲ့ ရွန်နီ အနာဂတ်မှာတော့ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်သွားမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ လိုက်နာရမယ့်အိမ်ထောင်ရေးစည်းကမ်းတွေကို ဆက်ပြီးချိုးဖောက်နေမယ်ဆိုရင် ‘လူတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးမှ သူ့တန်ဖိုးကို နားလည်ပြီး နောင်တတစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ကျန်နေရတဲ့ဘဝမျိုး’မရောက်ပါစေနဲ့ ရွန်နီရေလို့ ဆုတောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
မကျဂှိုငျးယား အတှကျအသငျးကောငျး ဗာရနျအတှကျ သတငျးဆိုး ..
နိုငျငံ့အသငျးအတှကျ သရဲနီဘဝကို စတေးတော့မယျ့ လငျဂတျ
အာဆငျနယျထုံးနှလုံးမူပွီး ယူနိုကျတကျ မခံခငျြစိတျနဲ့နိုးထနိုငျမလား?
ကှနျတီရဲ့ အစှမျးအစကို ဆိုးလျရှားလောကျ သဘောမကနြိုငျဖွဈနသေော ယူနိုကျတကျက မဟာဘုတျကွီးမြား
ဆိုးလျရှားကို ဥပက်ခာပွုလိုကျပွီဆိုတဲ့သတငျးကို တုံ့ပွနျလာတဲ့ ပေါ့ဘာ
ဆိုးလျရှားသာ နညျးပွနရောက ထုတျခံခဲ့ရမယျဆိုရငျ မထငျမှတျပဲ ယူနိုကျတကျနညျးပွမှာ ရျောနယျဒို ဖွဈလာတော့မလား…?
မိမိရဲ့ ပုံမှနျခွစှေမျးအောကျရောကျနတောကွာပွီဖွဈကွောငျး ဝနျခံစကားဆိုလာတဲ့ လုချရှော